Iza amin'ireo fanampiana manezioma no mety amiko? - Wellness | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Fiaraha-Monina Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanatanjahan-Tena Mavesatra Orinasa Fiaraha-Monina, Fahasalamana Orinasa, The Checkout Vaovao, Wellness Orinasa, Vaovao Mpanao Gazety Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Community, Company Pets Fanabeazana Ara-Pahasalamana Ny Fizahana
Tena >> Wellness >> Iza amin'ireo fanampiana manezioma no mety amiko?
Iza amin'ireo fanampiana manezioma no mety amiko?
Raha ny zavatra tokana anananao amin'ny magnesium any ivelany dia avy amin'ny mason'ny ronono magnesia indraindray manala ny alahelonao mandevon-kanina , hainao? Misy izao tontolo izao ny famenon-magozy manerantany! Ity nutrient mahagaga ity dia misy amin'ny endrika maro, miaraka amin'ny tanjona tsirairay mba hitsaboana ireo soritr'aretina samihafa.
Mba hahamora kokoa anao ny mankany amin'ny fivarotam-panafody eo an-toerana, fivarotana sakafo ara-pahasalamana na fivarotana vitamina ary hividy karazana tsara indrindra fanampiana magnesium ho anao, nangataka tamin'ny manam-pahaizana izahay hametraka ny safidinao rehetra-ary hanao tolo-kevitra vitsivitsy momba ny fomba, oviana ary ny antony tokony hanarahana magnesioma.
Inona no atao hoe maneziôma?
Ny magnesium dia mineraly tena ilaina ilain'ny vatan'olombelona mifehy ny zava-drehetra manomboka amin'ny hozatra sy ny rafi-pitabatabana ka hatramin'ny famokarana angovo, siramamy ao anaty, ary tosidra, hoy ny Ivon-toeram-pirenena fahasalamana (NIH). Ny ankabeazan'ny olon-dehibe dia mila manezioma 300 ka hatramin'ny 400 milligram (mg) isan'andro, ny ankamaroany dia avy amin'ny nohaninao - sakafo toy ny tsaramaso masaka, voanjo ary almond, avocado, akondro, legioma maintso, sôkôla mainty, voamaina feno, ary volontany ny vary dia manana tavy maneziôma avo, toy ny sakafo mimanda maro. Azonao atao ny mahita ny lisitry ny loharanom-pahalalana manankarena manezioma ao amin'ny Office of the Nutr's Office of Supplement Eto .
Na izany aza, mety tsy hahazo betsaka amin'io otrikaina io araka ny eritreretinao ianao.
Tombanana ho 80% ny olona tsy ampy magnesium, hoy ny mpitsabo naturopathic Jaquel Patterson, ND, talen'ny fitsaboana ao amin'ny Fairfield Family Health any Connecticut.
ny 2017 SIANTIFIKA fianarana dia manamarina fa tombatombana mety izany, ary manambara fa ny roa ampahatelon'ny mponina tandrefana dia mety tsy ampy magnesium (toe-piainana antsoina hoe hypomagnesemia). Ny ankamaroan'ny olona salama dia afaka miatrika tsy fahampiana amin'ny fotoana fohy, fa amin'ny fotoana maharitra dia mety ho hitanao ny fambara toy ny:
Malahelo na mandoa
Faharerahana sy fahalemen'ny hozatra
Kombo ny hozatra
Fahakiviana na fikolokoloana
Ny olona manana toe-pahasalamana sasany, toy ny aretin'i Crohn, ny celiac, ary ny diabeta Type 2 dia ahiana ho tsy ampy magnesium, toy ny olona amin'ny fanafody sasany (toy ny fanafody simika simika, antibiotika sasany, diuretika, ary mpanakana ny paompy proton).
Tombontsoa azo avy amin'ny manezioma
Ny tombony ara-pahasalamana amin'ny famenonan'ny magnesium dia mety ho malalaka, na amin'ny tranga sasany aza dia tsy ampy ny fikarohana mba hilazana amin'ny fomba azo antoka fa fitsaboana azo itokisana ny fampitomboana ny fihinanana. Manezioma dia mety hanampy amin'ny fanatsarana ireto manaraka ireto:
Manezioma fanampiny dia afaka mifehy ny fihetsiky ny tsinainao amin'ny alàlan'ny maha-an laxative osmotic , manintona ny rano ao amin'ny tsinay ary manamora ny fandalovana ny fihetsehana. Ny magnesium citrate sy magnesium hydroxide dia ohatra mahazatra amin'ny laxatives osmotic.
Mifandraika: Fitsaboana sy fanafody fanafody fitohanana
Raha mijaly amin'ny soritr'aretin'ny tongotrao ianao na ny fikorontanan'ny hozatra, dia mety ho afaka manampy ny famenon-tsakafo. Mampalahelo fa anecdotal ny ankamaroan'ity torohevitra ity; famerenana maromaro momba ny fanadihadiana mandinika ny fifandraisana misy eo amin'ny maneziôma sy ny fanalefahana ny fihenan'ny hozatra, ao anatin'izany ity avy any Cochrane , tsy naneho porofo mazava fa mandaitra ny famenonany manezioma (ny fikarohana kely dia mampiseho fa mety ho an'ny vehivavy bevohoka izy ireo, fa tsy ho an'ny vahoaka sisa.)
Samy ny Fikambanana Amerikanina marary andoha ary ny Fondation migraine amerikana manaiky fa ny magnesium supplement dia mety hahomby amin'ny fampihenana ny hamafin'ny aretina sy ny faharatran'ny aretin'andoha migraine, angamba satria ny olona voan'ny migraine dia hita fa ambany noho ny salan'isan'ny magnesium. Tao anatin'izay taona faramparany izay, dia nanjary ampahany ara-dalàna amin'ny fanazaran-tena amin'ny fisorohana migraine maro, indrindra ho an'ireo izay manana migraines tonga fotoana .
Mifandraika: Fitsaboana migraine sy fanafody
Manezioma manana fananana vasodilator. Midika izany fa afaka manampy amin'ny fanalefahana ny lalan-dra sy hitazomana ny tosi-dra ara-dalàna. Ny porofo ankehitriny dia manondro ny fihenan'ny tosidra kely miaraka amin'ny famenon'ny magnesium, izay rehefa mandeha ny fotoana, dia mety hitarika fahasalaman'ny fony kokoa sy risika ambany aretim-po, aretim-po, ary lalan-dra. Ohatra, a 2016 famerenana ny fianarana amin'ny fiakaran'ny tosidrà dia nahatsikaritra fa ny famenon-tsakafo 368 mg isan'andro isan'andro mandritra ny telo volana dia mifandray amin'ny haavon'ny tosidra systolika sy diastolika ambany.
Mifandraika: Ahoana ny fampihenana ny tosidra voajanahary
Raha ny voalazan'ny NIH dia mety hampitombo ny fanoherana ny insuline ny tsy fahampian'ny manezioma, izay matetika no alohan'ilay diabeta karazana 2. ny Fanadihadiana 2007 navoaka tao amin'ny Gazety fitsaboana anatiny nijery ny andraikitry ny fihinanana maneziôma amin'ny fisorohana ny diabeta Type 2; saika ny fanadihadiana rehetra noheverina dia nampiseho fa ny fampitomboana ny fihinanana manezioma hatramin'ny 100 mg isan'andro dia afaka mampitombo ny fahatsapana insuline ary mampihena ny risika diabeta Type 2 anao.
Fahakiviana sy fitaintainanana
Satria ny magnesium dia mandray anjara amin'ny fiasan'ny hozatra, ny anjara asany amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny aretin-tsaina dia nianarana ihany koa. Araka ny a Fianarana 2018 amin'ny zavatra mahavelona , ny tsy fahampian'ny manezioma dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fihenan'ny alahelo, ny tebiteby ary ny fanaintainana maharitra - ary ny fitomboan'ny fihinanana dia mety hanamaivana ny sasany amin'ireo soritr'aretina mifandraika amin'ireto fepetra ireto. Nisy ihany koa ny fikarohana sasany momba ny vokatry ny maneziôma kalitaon'ny torimaso sy tsy fahitan-tory , ary koa ireo tombony mety ho azy zaza tsy ampy saina tsy ampy saina (ADHD).
Vokatry ny manezioma
Ny magnesium amin'ny ankapobeny dia heverina ho azo antoka. Araka an'i Jeffrey Fudin, Pharm.D., Tonian-dahatsoratr'i paindr.com , ny voka-dratsy ateraky ny famenonan'ny magnesium - toy ny fisaleboleboana, fandoavana, fikosoham-bika amin'ny tarehy, torimaso ary fihenan-tsasatra, fihenan'ny tosidra, ary ny tsy fetezan'ny fo - dia matetika no hita amin'ny fatra avo dia avo ambonin'ny 5000 mg isan'andro.
Na dia mety tsy handray magnesium ampy aza ianao mba hisy vokany hafa, dia azo atao ny mifangaro amin'ny fanafody iray hafa rainao na azo atao contraindicated noho ny aretina efa misy. Anisan'izany ireto:
Zava-mahadomelina ampiasaina hitsaboana osteoporosis , toa Fosamax , izay afaka nampihena ny fitrohana ny vavony rehefa nalaina tamin'ny maneziôma. Ireo fanafody roa ireo dia tokony hosarahana adiny roa farafahakeliny, hoy ny dokotera Fudin. Raha tsy izany dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny taolana.
Kilasy misy antibiotika sasany , ao anatin'izany ny tetracyclines, toy ny doxycycline, ary quinolones, toy ny levofloxacin sy ciprofloxacin. Dr. Fudin dia manolo-kevitra ny handray ireo antibiotika ireo adiny roa alohan'ny na adiny enina aorian'izany manezioma hisorohana ny fifandraisana.
Diuretika sasany ampiasaina hitsaboana aretim-po, toy ny amiloride, spironolactone, ary triamterene, izay nolazain'i Dr. Fudin fa mety hahatonga ny vatana hihazona magnesium ary mety hiteraka fatrany avo lenta raha toa ka manampy izany koa ianao.
Ary farany, ireo olona manana trangan-javatra mety hampidi-doza toy ny fihenan'ny fiasan'ny voa — ao anatin'izany ny olon-dehibe sy ny olona diabeta- dia azo inoana kokoa ny manangona magnesium avo lenta, hoy ny dokotera Fudin, noho izany dia tokony hanisy magnesium fotsiny izy ireo eo ambany fiahian'ny dokotera. na farmasia.
Raha toa ianao ka googling magnesium supplement ary mahita karazana am-polony maro hafa mipoitra dia mety hahatsapa ianao fa mila diplaoma simia hilazana ny mahasamihafa azy tsirairay.
Soa ihany, azonay atao ny manamora kokoa izany aminao: Momba ny fifandraisana izany. Miankina amin'ny singa hafa ampiarahina amin'ny manezioma, ny endrika sasany dia mandray mora kokoa amin'ny lalan-drà noho ny hafa — ary izany dia afaka manova ny fomba fiasan'ny magnesium ao amin'ny vatanao.
Ny safidy famolavolana samihafa dia zava-dehibe satria samy manana ny fahaizany mandray azy ireo hatrany amin'ny tsinainy mankany amin'ny lalan-drà, hoy ny Dr. Fudin. Ny sasany dia mety levona kokoa amin'ny rano raha oharina amin'ny hafa ary noho izany dia mora voataona ao anaty ra, [raha] ny masira izay tsy dia voafoka tsara dia mamela magnesium ao aorinan'ny tsinay, izay lasa laxative osmotic.
Vonona mora foana: magnésium klôroida, citrate maneziôma, aspartat manezioma, L-threonate, lactate, glycinate, malate, orotate, ary taurate
Tsy dia variana loatra: Oxyde sy sulfate (izay ampiharina amin'ny hoditra matetika, saingy tsy dia misy porofo manamarina fa voaraikitra tsara amin'izany fomba izany koa)
Fanampiny manezioma tsara indrindra
Anjaranao sy ny mpitsabo anao no mamaritra hoe iza ny famenony manezioma tokony horaisinao. Fa satria ny fahitana ny famolavolana marina dia matetika mandanjalanja ny fatran'ny manezioma ao anaty lalan-drào manoloana izay tadiavinao na mila magôniana hatao, dia azonao atao ny maminavina ny toerana hanombohana.
Ampitahao ny fanampim-panazavana magnesium
rijan Manezioma miharo Dosis mahazatra isan'andro Ny tsara indrindra amin'ny fitsaboana Makà tapakila
Magnesium klôro(Anaran'ny marika: SlowMag) Kôlôlinia fototra
200-500 mg Aretim-po, fitohanana, hozatra marary (lohahevitra) Makà tapakila
Manezioma sitrat(Anaran'ny marika: Milamina ny vitaly voajanahary) Asidra sitrika 300-600 mg (na ny habetsaky ny ranoka / vovoka atolotra amin'ny fonosana) Fitohanana, migraines,
fiovan'ny toetr'andro (mety hanatsara ny fanahiana sy ny fahaketrahana) Makà tapakila
Glycérate manezioma Glycine(asidra amine) 300-600 mg Tsy fahitan-tory, fitaintainanana, fihenjanana Makà tapakila
Lactate manezioma(Anaran'ny marika: Mag Tab SR) Asidra lakika 200-400 mg Olana kely momba ny fandevonan-kanina, manezioma ambany Makà tapakila
Magnesium L-threonate (anarana marika: Magtein) Asidra Threonic 1,500-2000 mg Olana momba ny neurolojia, toy ny ADHD, dementia, fitaintainana, famoizam-po Hamantatra bebe kokoa
Magnesium malate (anarana marika: MagSRT) Asidra malika 200-500 mg Fanaintainana maharitra, havizanana, haavon'ny magnesium ambany Hamantatra bebe kokoa
Magotôly orotate Asidra orotic 200-500 mg Magdalie ambany, fanohanan'ny kardia Hamantatra bebe kokoa
Magnesium oxide(Anaran'ny marika: Mag-Ox) oksizenina 200-500 mg Ny aretin-kibo sy ny tsy fihinanan-kanina Makà tapakila
Magnesium sulfate(Anaran'ny marika: sira Epsom) Solifara sy oxygen Fampiasana am-bava : 2-6 tsp levona anaty rano 8 ans (olon-dehibe sy ankizy mihoatra ny 12 taona)
Fampiasana lohahevitra : Kaopy 2 levona anaty rano mafana galona Ny hozatra marary, ny fanamaivanana ny alahelo Makà tapakila
Magnesium taurate omby(asidra amine) Mahatratra 1.500 mg Fiasan'ny kardia (mety hanatsara ny haavon'ny siramamy amin'ny rà sy ny tosidra) Makà tapakila
Fanamarihana: Ireto ny tolo-kevitra momba ny fatra antonony nomen'ny mpanamboatra fanampiny; tsara kokoa ny manaraka ny torohevitra ara-pitsaboana matihanina amin'ny mpitsabo iray momba ny doka maneziôma. Ampahafantaro hatrany amin'ny dokotera izay fanampiana azonao alaina.
Fanampiny manezioma ho an'ny ankizy
Tokony hiresaka amin'ny dokoteran-jaza foana ny zanakao alohan'ny hanomezana azy ireo famenon-tsakafo, fa ny magnesium dia mety, amin'ny tranga maro, dia safidy azo antoka ho an'ireo ankizy voan'ny ADHD na soritr'aretin'ny tongotra tsy milamina.
Magnesium L-threonate dia tonga amin'ny vovoka mahasoa ho an'ny ankizy ary mety hanana tombony amin'ny ati-doha izay afaka manampy amin'ny ADHD, hoy ny Dr. Patterson. Ny oksidia manezioma na citrate dia azo ampiasaina ho an'ny ankizy voan'ny sindrom-tongotra tsy milamina na ankizy mila fanampiana fotsiny amin'ny alina.
Isaky ny Mayo Clinic , ny tambin-karama omena sakafo (RDA) ho an'ny ankizy hatramin'ny taona 3 dia 40 ka hatramin'ny 80 mg isan'andro, raha ny ankizy 4 ka hatramin'ny 6 taona dia mety mihinana 120 mg ary ny ankizy eo anelanelan'ny 7 sy 10 dia mety mihinana 170 mg. Ny dokoteran-jaza kosa, dia mety hanolotra fatra ambony na ambany mifototra amin'ny fahasalamana sy soritr'aretin'ny zanakao amin'ny ankapobeny.
Dr. Patterson, ohatra, matetika dia manome soso-kevitra ny ray aman-dreny manan-janaka lehibe manomboka amin'ny 300 mg manezioma ary mampitombo miadana ny vola raha ilaina. Na izany aza, ny fatra 500 ka hatramin'ny 600 mg dia mety hiteraka sefo (izany no famantarana fa tokony hampihenao kely ny fatrao). Raha tsy tian'ny zanakao ny misotro famenony manezioma dia maro no azo tsakoina na koa gummy formations .
Vokany Zoloft: Inona no antenaina amin'ny herinandro voalohany amin'ny fandraisana Zoloft
Saniterera telefaona 11 tsara indrindra hanadio ny sela
afaka mihinana tylenol sy misotro toaka ve ianao?
afaka misotro toaka ve aho rehefa mandray gabapentin?
impiry ianao no tokony mampiasa inhaler albuterol
firy ny haavon'ny siramamy aorian'ny fisakafoanana?
inona ny fanafody allergy azo antoka mandritra ny fitondrana vohoka
plan b pill farany azonao alaina